Taariikhda My Butros » Yappily Ever ka dib: Diyaar ma u tahay 'Family milmay' ah?
by Iska daa Ann
Haddii aad bilowday shukaansi ah lover xayawaanka la shaqayn jiray, aad horey u wax muhiim ah in caadi: jacaylka aad xoolaha. Xayawaanka qayb ka mid ah qoyskaaga waa. Waxay u badan tahay in aad dareento iyo xayawaanka waa heshiis xirmo; haddii aad taariikhda ma ka heli kartaa oo ay la socdaan rabaayadda, waxa la joogaa wakhtigii si ay u fiiriyaan meelo kale.
Haddii xayawaanka aad mar walba soo horeeyo, sidee ayaad u dhexgalaan xidhiidh cusub jacaylka galay noloshaada? Miyuu taariikhda la kulmay rabaayadda? Sida waalidiinta oo hal, Milkiilayaasha xayawaanka qaar ka mid sugi in la arko sida xiriirka ka dhaco hor keeno xiisaha jacaylka gurigooda si ay ula kulmaan “xayawaannada.” Ma sida habka uu taariikhda macaamila xayawaankaaga? Saaxiibkaa cusub ma ku dadaasho in aad hesho in la ogaado xayawaankaaga? Waxaan maqlay nin oo lahaa baqbaqaaq ah, oo isna wuxuu u doondoonay behaviorist shimbir inay caawiyaan shimbir aqbali saaxiibtiis cusub galay “iyo ido.” Markii ugu, dadaal, oo jecel saaxiibta maalgeliyeen uu shimbir ahaa mid ka mid ah waxyaalihii uu ka dhaadhiciyay naagtan waxaa lagu “mid ka mid ah.” Waxay guursatay, iyo shimbirta ayaa ku farxay.
Taariikhda ma heli weheliyaan weyn oo xoolaha, laakiin AAD daweeyo sida toy ah eey xirto-baxay? Inkasta oo aan rumaysan jecel xoolaha waa tilmaame wanaagsan ee awoodda ay u jecel yihiin in guud, mararka qaar hal rafiiq laga yaabaa in ay dareemaan “class-labaad” xayawaannada kale ee. Waxaa muhiim ah in la qabto isku dheelitirnaan halkan. Waxaan mar ogaa nin tuuray Jeceylkeyga korkaaga Jacayl tur iyo dhaqma si qabow u qaadnaa uu eey, laakiin hadal ahaan iyo jir dil loo geystay saaxiibtiis u gaar ah.
Weligaa ma laga codsaday in ay kala doortaan Wadaage iyo xayawaanka ah? Jawaabta inta badan waa in xayawanka, oo ha lamaanahaaga tagaan. Nooca A, jecel lamaanahaaga waaban doonto in ay ku siiyaan sida danbays ah. (Haddii lammaanahaagu uu leeyahay xasaasiyado daran ama cabsi bahal ah ee xayawaankaaga, arimahan inta badan waxaa lagu xallin karaa caawinaad xirfad leh, Labada qof haddii ay raali ka yihiin.) Inta badan dadka aad dalban dooran yihiin meelo aan ammaan ahayn oo gacanta lagu, oo ma taagnaan karo “wadaagaya” aad xawayaan rabbaayadaysan. Iyagu ma ay fiirsaneysa dareenkaaga; kaliya iyaga u gaar ah. Intaas waxaa sii dheer, xataa haddii aadan ku macsalaamayn in xayawaankaaga, lammaanahaaga badan tahay masayr wax kale heli lahayd: waqtiga aad la saaxiibada ama qoyska, aad rabtay, hiwaayadaha, xitaa suurto gal ah in aad shaqo. Digtoonaada haddii nahay weydiiyo in aad samayso doorashada sida a.
Su'aalaha ay laba idinka mid:
– Ma leedahay oo ku filan si loo sii joogteeyo xiriir gees uga leexan aad Jacayl dhexdiinna ah xoolaha?
– Sidee xayawaankaaga guriga lala midba midka kale? Ma cid idinka mid ah leeyihiin bisadaha, haadda kale? Aad u xalin karaa khatarta iman karta ee xayawaanka guriga u muuqda leheyn?
– Ma labada idinka mid ah fikradaha kala duwan oo ku saabsan xayawaanka aad guriga’ hab nololeed? Tusaale ahaan, ma uu dareensan yahay inuu cat waa inay joogaan gudaha iyo seexdo isaga la sariirta, laakiin waxay si adag u aaminsan in bisadaha ka baxsan iska leh? Haddiiba ay shimbir oo shaaca ka qaaday waxa ay ka heli fawaakih organic iyo iftiiminta spectrum buuxa, ma wuxuu u arkaan inay tani qashinka ah overindulgent of lacag? Haddii mar kasta oo uu kaxeeya uu qaato oo uu eey isaga la, ma iyadu haba naceen neefta eey iyada oo dhegta?
– Fadhiiso oo la hadal kasta oo kale oo ku saabsan welwelka aad ka. Waxaa laga yaabaa in ay dareemaan khatar ah, laakiin waxaa dhaanta inay tani samayn dhaqso badan ka dib, oo aad aragto waxaa laga yaabaa muhiim ah oo ku saabsan taariikhda inta falanqayntu socoto: sida uu isagu ama iyadu ulama maadooyinka laga yaabo dhegdheg. Kartida in ay xaliyaan khilaafaadka ka mid ah opinion waa tilmaame wanaagsan ee xiriirka raagta.
Haddii aad tahay xayawaanka labadaba ku caashaqay, aad tahay mar hore ka baxsan si ay bilow wanaagsan. Ka dhig wada-hadalku u furan oo ay qaataan waqti ay ku raaxaystaan ​​midba midka kale (leh ama aan lahayn rabaayadda). Qaado waqti aad ku socotaan socod ah, dhuuqaan urta ka, iyo jilif, Meow, Squawk, iyo fooryo Quluubtiinnu’ content!
6 Su'aalo Lammaanayaasha waa in ay tixgeliyaan hor inta aanay is A Butros